Posted By: KongoLisolowaa: May 9, 2020 00: 55 1 Comment
Muxuu K. West u leexday 180 digrii sannado badan ka dib (oo uu ka booday Amber Rose) ?? Miyuu ahaa midabka maqaarka cad ee u jiiday isaga K. Kardashian ?? K. West, miyuu ku dhacay reer Kardashians? Xiddig ahaan, K. West ma loo qaaday cirka 7aad quruxdii lagu qasi jiray khiyaanooyinka Kim ee loogu yeero "Kashiyaannada Cajiibka ah" ??
Isagoo la joogaya Kim Kardashian, waxay u muuqatay in haddii Kanye West ay ku dhacday hillaac taas oo ka dhigtay inuu iloobo gabadhii uu jeclaa (iyo Amber Rose). Tan iyo markaasna qalbigeeda ayaa kaliya ku garaacayay garaacista Kim K., waana taas sababta Kim ay ugu suurtagashay inuu ka xado K. West gabadha uu guursanayo (iyo Amber Rose).
Fasax fudud wuxuu ahaa salka meesha laga leexdo. Oo tan jacaylkii jacaylka ayaa u rogay faa'iido darradii hore ee Kanye Galbeedka!
Ciyaaraha carruurta: waa mashiin dhab ah oo koritaan shaqsiyadeed ah: baaxadda ba'an ee walaxda-rabitaanka carruurtu waxay u oggolaaneysaa iyaga inay si fudud uga fikiraan cayaaraha u oggolaanaya inay badsadaan ilaha ay ka helayaan raaxada sidaasna ay ugu diyaargaroobaan inay wajahaan caqabadda. ciyaarta weyn ee nolosha markay weynaadaan
Dameerkan madowga ah ee Nigeria ayaa lumay. Haweenka madow ma doonayaan isaga si kasta
Dec03 01: 37